Bulshada Fagersta oo Jaaliyad dooratay | Somaliska
Ka dib dood dheer iyo isjiidjiid ayaa bulshada Soomaaliyeed ee Kamuunka Fagersta waxay ku guuleystay in ay ku kala baxaan codeyn ayadoo ugu dambeyntii lagu soo kala tagay ayadoo la midaysanyahay.
2 isbuuc ka hor ayay ahayd markii Maamulka kamuunka fagersta ay isugu yeereen Bulshada Soomaaliyeed ayagoo u sheegay in ay soo gaartay codsi labo jaaliyadood balse aysan la shaqayn karin mid ka badan sidaa darteed maanta loo balamiyay in ayagoo midaysan ay yimaadaan.
Balse taas ayaan dhicin oo waxaa sii kordhay khilaafkii ayadoo ay taasi keentay in lagu kala baxo cod, oo cidii hesha codka badan ay kamuunka la shaqeynayaan.
Hadaba doorashada ayaa dhacday oo labada dhinac ee tartamayay ay heleen codod isku dhow ayadoo dhinicii codka batay ay kamuunka iyo bulshadu u bishaareeyeen ayna balan qaadeen in ay la shaqeynayaan. Ayadoo sidoo kale dhinicii laga adkaaday ay balan qaadeen in ay la shaqeynayaan.
Isqabqabsiga Soomaalida ee arinta jaaliyada ayaa ah mid markasta ka dhacda dalkan Sweden, ayadoo tan loo eedeynayo dhibaatada ku habsatay dalkeenii hooyo ee aanan soo arag hab maamul iyo midnimo mudo 20 sano ah.
Bulshada Fagersta oo Jaaliyad dooratay
Jaaliyado been ugu qaraabanaya magaca Soomaalida
Farax dharkiisa ayaa banaanka loo soo dhigay [Daawo]